Iyo Gypsy Mwenga Trilogy, iyo tsotsi inoverengeka saga iyo inotora zviuru | Zvazvino Zvinyorwa
Iyo Gypsy Mwenga Trilogy
Kana mushandisi weinternet achitsvaga "iyo gypsy mwenga trilogy", iyo skrini inoratidza zvinongedzo zvine chekuita nenyaya iyo yakabata zviuru zvevaverengi. Iyo tsotsi inoverengeka nhepfenyuro yakatanga nekutangwa kwe Mwenga wechiGypsy (2018). Pamwe, chikamu chikuru cheveruzhinji chakawana mubatanidzwa wenyaya yematsotsi pamwe nezvimwe zvakamiririrwa pamusoro penzvimbo yechi gypsy isingadzoreki.
Gore rakatevera rakabudiswa Mambure epepuru, imwe nhanho ine kukura kwayo kwakabatana zvikuru nekupera kwebhuku rekutanga. Panzvimbo iyoyo nharo ye Mucheche (2020) -Kunyange iine protagonist mumwechete muzvikamu zviviri zvekutanga— pInogona kunzwisiswa usina kuverenga iwo akafanotangira zvinyorwa.
1 Ndiani munyori?
2 Trilogy kuongorora
2.1 Iyo protagonist
3 Gypsy Mwenga (2018)
4 Iyo Purple Network (2019)
4.1 Chirongwa uye zvinyorwa
5 Vacheche (2020)
5.2 Kukurumidza kufungidzira kukura, asi zvakaenzana muropa
Mabhuku eiyo gypsy mwenga trilogy akasainwa na Carmen Mola, zita rekunyepedzera. Muchokwadi, pane iyo carmenmola.es webhusaiti tsananguro yacho inoti: "… munyori akaberekerwa muMadrid uyo asarudza kuramba asingazivikanwe". Saizvozvo, mune mamwe mabhuku ezvinyorwa mareferenzi pamusoro pemunyori anotaura nezvomudzidzisi anoshanda muguta guru reSpain.
Mola akataura kakawanda (kuburikidza nemupepeti wake) kuti kurudziro yake yekunyora ndeyekutamba. Nenzira imwecheteyo, Anowanzo taura Fred Vargas, Toni Hill, Lorenzo Silva, Lemaitre kana Alicia Giménez Barlett, pakati pevamwe, sekukurudzira kwake kukuru. Nekuda kweichi chikonzero, akazendamira padanho renyaya yekuparwa kwemhosva, nekuti achifunga kuti "zvinoshanduka panguva imwechete senzanga."
Bhuku roga roga rinopa imwe nyaya yakatarwa naElena Blanco, mutambi mukuru wesaga rese. Iye akangwara akaongorora "akarungwa" nezvose zvakajairika zvikamu zvematsotsi novel protagonist. Ndokunge, mukadzi mumwe (akarambana) ane hasha dzakasimba anonyanya kukonzerwa neyakaipisisa yapfuura.
Zvirokwazvo, kutambudzwa kwakakwezvwa naBlanco hakusi chero: anofungidzira kuti mwanakomana wake akabiwa ne "yepepuru mambure" (wepakati dingindira rebhuku repiri). Uyezve, Iye anofarira karaoke, anofarira kunwa zvakanyanya, anonyanyisa uye anokwanisa "kurarama" nekukanganisa kwemhondi. Iyi yekupedzisira mhando yakakosha kwaari kuti ajekese zvese zvisingazivikanwe.
Iwo haasi anokurudzirwa zvinyorwa zvevanhu vane hanya, izvi zvichikwira padanho rehutsinye hunoratidzwa nema psychopaths anokonzeresa mhosva. Zvakawedzera, kusurukirwa chinhu chinogara chiri munhoroondo, iine hutsinye uye kunyangwe eschatological mifananidzo. Kunze kweropa rose - sekusemesa kune vamwe vaverengi sekupindwa muropa nevamwe - ese mabhuku matatu akanyatsoitwa.
Kunyangwe uine protagonist zvishoma "cliché" yenyaya yematsotsi, hoko inogadzirwa nemazita matatu hairambike. Chimiro chipfupi uye chinonetesa chezvikamu zvaro chinopa zvakawanda kune izvi. Nepo huru yekutaurisa tambo yakatakurwa nekugadziriswa kwematsotsi, iwo anowedzerana nyaya uye mavara anowedzera kuomarara kuchirongwa (pasina kudzikisira kubva mukushomeka kwayo).
Mupfungwa iyi, Zárate anoita seakakwana kusaremerwa uye ishamwari yaInspector Blanco. Eheka, ambuya vekuba ndiye munhu wepakutanga mune yese saga. Pamwe chete, vese-nyeredzi-nyeredzi uye yega yezvikamu zvinosimbisa kufarira kwevateereri mukuziva mhedzisiro yezviitiko.
Mwenga wechiGypsy (2018)
Susana Macaya anoonekwa akafa mazuva mashoma mushure mekupemberera yake bachelorette pati. Kutanga, imhosva inokanganisa nekuda kwemaburi akagadzirwa mumusoro weiyo occisa, kuburikidza nehonye dzakatangwa. Nechikonzero ichi, matikitivha anoratidzira nzira inotyisa yekuuraya nenyaya yaLara Macaya, hanzvadzi yaSusana, akaurayiwa makore manomwe apfuura.
Kunyangwe mhondi yaLara yakawanikwa ikaiswa mutirongo, kusahadzika kunopinda mumapurisa ese inotungamirwa naInspector Elena Blanco. Vakavharira murume asina mhosva here? Pane imwe psycho inodzokorora nhanho dzakafanana? Chikonzero chimwe chete ndicho chinoratidzika kunge chisina mubvunzo: hutsinye hwakaitirwa vasikana vevabereki vechiGypsy vakasiya tsika dzavo kuti vazvibatanidze munharaunda yemazuva ano.
Iyo gypsy mwenga (Mwenga ...
Mambure epepuru (2019)
Iri ibhuku reNeuralgic yesaga, nekuti kupera kwechikamu chekutanga kunoguma nekutsvaga kwakanyanya kukosha kwaElena Blanco: kwemwanakomana wake Lucas. Chii chimwe, Mambure epepuru inosanganisira mhosva dzisingaperi dzinotyisa, kusanganisira nyaya dzine chekuita nekufa kwehanzvadzi dzaMacaya.
Sezvo mukati Mwenga wechiGypsy, chokwadi chinowana inertia yakatamiswa nguva pfupi pasati pari pakati pebhuku. Panguva iyoyo, muverengi anogara achitarisana nemibvunzo nezve kuzivikanwa uye zvinokurudzira matsotsi. Vaya vane hushingi hwakajeka uye vasingatyi zvekuti ivo vanokwanisa kutapudza kwavo kutambudza pamusoro peinternet.
Iyo Purple Net (Mwenga ...
Kana imwechete yepepuru network yabvutwa, Elena Blanco anosiya chigaro chevatsva kuti vanakirwe nehupenyu hwemhuri. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti mupepeti muongorori ndewemhuri yakapfuma (ichi chikamu chinopesana neye archetype ye "wepasirese" mutikitivha munhoroondo yematsotsi). Hazvishamisi kuti iye ane imba muPaza Meya muMadrid.
Kukurumidza kufungidzira kukura, asi zvakaenzana muropa
Blanco anonyorerwa zvakare nemapurisa apo mumwe weavo vaongorori (Xesca) anonyangarika zvinoshamisa mushure mekuenda kumafaro. Kunyanya, hapana munhu akazviona mushure memhemberero yekupinda kwegore reChinese (iro renguruve). Ikoko, mukadzi asipo akasangana nemurume anokwezva, kana aifungira zvishoma. (Kusvika panguva iyoyo, zviitiko zvinotarisirwa, asi…).
Xesca anomuka akasungirirwa pamubhedha padyo nepurazi renguruve (musikana anozvinzwa). Naizvozvo, pati uye iyo macabre tsika iyo yave kuda kutanga inoita kunge ine imwe mhando yehurwere hukama. Nenzira iyoyo, nhangemutange inopesana nenguva inotanga kununura musikana pakati pekumhanya-mhanya kuita kwakazara nendima dzinotyisa.
La Nena (Iyo gypsy mwenga ...
Chikamu chekupedzisira che Mwenga wechiGypsy Iko kukokwa kuti urambe uchiongorora zviitiko zvakakomberedza Inspector Blanco. Kusiyana nemhedziso ye Mambure epepuru and of Mucheche, inoita kunge yakajeka. Kunyange zvakadaro, zvichipa budiriro yemupepeti waCarmen Mola, kuburitswa kwemazita matsva ane nyeredzi Elena Blanco hakungashamise kana kunyange nhepfenyuro yeterevhizheni.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » Iyo Gypsy Mwenga Trilogy
Luis Castañeda. Kubvunzana ne2020 Amazon Literary Award Winner
Mabhuku aElísabet Benavent